Iswiti kunye ne "Sassy"-4 Igumbi lokulala eli-2 lokuhlambela loMlambo ekhaya
Quaint---***Inkulu kunemifanekiso ibonisa *** Igumbi lokulala eli-4 elineebhafu ezi-2 ezigcweleyo, ikhaya losapho olunye. Siyibhloko kude noMlambo i-Sassafras, unxweme loluntu lwabucala, ukufikelela kwisikhephe kunye neendawo zokutyela ngqo emanzini. Uya kukuthanda ukutshona kwelanga, ukuphuma kwelanga kunye nokufikelela emlanjeni ukuze uqubhe, ukukhwela inqanawa, kunye nokukhwela inqanawa. Uluntu luzolile kwaye luzolile kwaye intle. Iikayak ziyafumaneka ukuba uzisebenzise.
Ikhaya lilungele amaqela omsebenzi, amaqela amancinane okurhoxa, ixesha loSapho, iLadies Weekend, amaqela okuzingela, kunye noNdwendwe lwabahlengikazi. Eli khaya likhudlwana kunokuba likhangeleka....zonke iindwendwe zothuswa yindawo enayo!!
Indawo yomlilo kunye nendawo yangaphandle yokutya kunye nokonwabisa. Ukufikelela emlanjeni kunye nerempu yesikhephe. Iindawo zokutyela ezifana neKitty Knight House kunye neFish Whistle (Granary) zikufuphi kanye kwisidlo sangokuhlwa. Kukho iindawo zewayini ezikufutshane kwaye iChestertown okanye iChesapeake City imalunga nemizuzu eli-15 kuphela. Eli khaya likhulu kunokuba likhangeleka kwaye linee-kayaks, ii-floats kunye neevesti zobomi ukuze iindwendwe zethu zizonwabele. Uluntu luzolile kwaye luyathandeka ukonwabela wena. Eli khaya limalunga nemizuzu engama-20 ukusuka eMiddletown. De, Chestertown, MD, malunga neyure ukusuka eBaltimore, kwaye kufutshane ne-Annapolis. Wifi kodwa akukho TV
Lo ngumphakathi omncinci ozolileyo. Kufuphi nezixeko ezininzi ezikhulu okanye kufutshane neendawo zeentsapho eziphuphumayo eziza kutyelela! Quiet Hours 10pm-8am.....olu luntu alunyamezeli izinto ezingxolayo.